Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed: videos 30 videos - Geofumadas
Janaayo, 2015 Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
Gobokogal aan qarsooneyn oo ku dhow waxkasta oo aan sameyno, iyada oo la adeegsanayo qalab elektaroonik ah, ayaa ka dhigay arin GIS ah oo sii kordheysa si degdeg ah u dalbato. 30 sano ka hor, oo ka hadlaya isku-duwid, jidka ama khariidadu waxay ahayd arrin xasaasi ah. Isticmaalay oo kaliya khabiirada kartida ama dalxiisayaasha aan samayn karin khariidad inta lagu jiro safar.
Maanta, dadku waxay kaala talinayaan khariidooyinka laga soo qaato aaladaha mobile, goobaha laga soo galo shabakadaha bulshada, iskaashatada kartoonka sawir la'aan iyadoon ogayn, geli qodobbeddel mawduuc ah. Dhammaantoodna waxay u fiican yihiin qaybta GIS. Inkasta oo caqabaddu weli tahay mid adag, maaddaama ay sii ahaanayso edbin ah oo cilmi badani ay soo dhex galaan, dhammaantood waxaa ku jira culeysyo xagga samada ah ilaa cadaabta.
Waqtiga ayaa imaan doona marka la isticmaalayo macluumaadka joqraafi joogta ah. Anigu kama hadlayo muujinta khariidada, laakiin waxaan ugu yeerayaa lakabyo, miyir beelid, abuurista qalab, qaabeynaya jawi 3D. Taas awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro khibradda lahaanshaha, iyo sidoo kale isticmaalka mobile maanta; Qofna maaha takhasus gaar ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh qoraalka. Dhanka kale, waxaad u baahan tahay inaad wax ka barato GIS. Ka badan isticmaalka qalab, fahmida asaaska astaamaha xogta kartoomyada, ka soo soosaaridooda si ay u helaan helitaanka cidda isticmaali doonta.
Waa farxad ii ah inaan soo bandhigo taxane fiidiyowyo waxbarasho ah oo ku saabsan taxanaha macluumaadka ee macluumaadka joqraafiyada. Ujeedada kuwa doonaya in ay fahmaan asaasiga, mabaadiida, codsiyada iyo isbeddellada GIS, ayaa lagu sameeyay 30 fiidiyowyo la caleemo saaray oo ah qaybo garaaf ah oo aan ka badneyn daqiiqado 5.
Astaamaha guud ee GIS
Araajida Juqraafiga ee GIS
Isticmaal kiis: Cadastar Canshuurta
Isticmaal kayska: maamulka dhulka
Isticmaal kayska: Qorshaynta dhulalka
Isticmaal kiis: Maareynta Khatarta
Mabaadi'da guud ee joqraafi quseya GIS
Fikradaha guud ee joqoraafiga: nidaamyada tixraaca
Mabaadi'da Guud ee Juqraafiga: Isku dubarid hababka
Mabaadi'da guud ee joqraafiga: matalaad loo qaabeeyey
Fikradaha guud ee joqoraafiga: Qodobbada aasaasiga ah ee map
Wajiyada geedi socodka kartoonka
Qaybaha farsamada ee isticmaalka GIS
Qeybaha kala duwan iyo tayada
Kala duwanaanta CAD iyo GIS
Qabashada xogta gudaha: hababka cabbirka
Isticmaalka GPS si ay u qabtaan macluumaadka joornaalka
Sawirada hawada iyo sawirada dayax gacmeedka waxaa lagu qiyaasaa GIS
Fasiraadda sawirada sawirrada
Isticmaalka dareemayaasha meelaha fog fog ee sawirada dayax-gacmeedka
Codsiyada qalabka fog
Horumarinta Tiknoolajiyada ee isticmaalka GIS
Daabacaadda xogta internetka
Maareynta xogta macluumaadka qaaska ah
Bandhigyada xogta qarsoodiga ah
Caqabadaha Xirfadayaasha Gooba
Shaqada xirfadlayaasha GIS
Baaxadda horumarka farsamada
Isticmaalidda si tartiib ah ee teknooloojiyada ee GIS
Barnaamijka GIS ee gaarka ah
Isticmaal barnaamij bilaash ah ee isticmaalka GIS
Falanqaynta muuqaalka maababka
Isticmaalka heerarka GIS
Si loo helo bilaash, waxaan soo dhaweynaynaa Educatina.com iyo kooxdiisa. Markaad haysato mawduuc hagid ah ee xadgudubka ka muuqda, waxa uu ku celinayaa dareenka caadiga ah wuxuuna u muuqdaa awoodiisa garaafka ... si loo qoro.
Halkan waxaad ku daawan kartaa fiidiyowyada liiska Playlist.
Post Previous«Previous Maxaa ku dhacay Twitterka Top40 ee Geospatial Geoffatial
Post Next Maareeyaha joogo da'ayeen for BricscadNext »